NEX4 5th Year Anniversary – NEX4 Blog
nex4 5th year anniversary
NEX4 ICT SOLUTIONS ၏ (၅) နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ပွဲနှင့် ကြေညာချက်များ Customer တွေအတွက် အကောင်းဆုံး ICT ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ NEX4 ရဲ့ (၅) နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည် အထိမ်းအမှတ်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ (၁၄) ရက်နေ့က Lotte Hotel Yangon မှာ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ IT Industry မှာ ၅ နှစ်ကျော်ကြာ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ NEX4 ရဲ့ ဒီ အထိမ်းအမှတ်ပွဲကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Partner အဖြစ်လဲ Loyal Customers ပေါင်း ၂၅၀ ကျော် တက်ရောက်ချီးမြှင့် ခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာပြည်ရဲ့ IT Industry မှာ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်တာကာလအတွင်း နည်းပညာပိုင်း (Technical) ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ Partner (Vendor) အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အဘက်ဘက်ကနေ နည်းမျိုးစုံဖြင့် ကျနော်တို့လက်တွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့ ကြပါတယ်။ ဒီလို Partner တွေနဲ့လက်တွဲပြီး လုပ်ဆောင်ရာမှာ ပြည်တွင်းရော ပြည်ပမှာပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဖြန့်ကျက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။‍‍‍‍‍‍
ဒီ အထိမ်းအမှတ် ပွဲလေးကို အစီအစဉ်အားဖြင့် နေ့လည် ၁ နာရီမှစတင်ခဲ့ပြီး –
🔹 NEX4 မှ Security Consultant ဖြစ်တဲ့ ကိုရဲမျိုးသူမှ Security Operation Center and Soar Technology ကိုလည်းကောင်း
🔹 UC for Enterprises ကို ကိုဘိုဘိုအောင်
🔹 ACI Solution for Enterprise ကို ကိုရန်နိုင်အောင်
🔹 NEX4 စတင်မွေးဖွားလာခြင်းနှင့် Partner များအကြောင်း၊ Cisco နှင့် လက်တွဲဖြစ်ပုံတို့ကို ကိုသူရိန် (Managing Director) မှ လည်းကောင်း
🔹 Firewall Deployment in ACI အကြောင်းကို ကိုရန်နိုင်မှ လည်းကောင်း
🔹 WAN Evolution နဲ့Benefits of SD WAN အကြောင်းကို ကိုရန်နိုင်ဦးမှ လည်းကောင်းအသီးသီး လက်တွေ့ရှင်းပြသွားခဲ့ပါတယ်။‍‍‍‍‍‍
➡ ထို့နောက် ညနေ ၆ နာရီမှစတင်ပြီး Customers & Partnership, NEX4 Team စတည်ထောင်ခဲ့ ပုံကို Corporate Anniversary Video ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ပြသပြီး ဧည့်သည်တော်တွေကို အစီအစဉ်များနဲ့ ဖျော်ဖြေမှု တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် NEX4 ရဲ့ Managing Director ဖြစ်သူ ဦးအောင်သူရိန်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြား ပြီးပွဲကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။‍‍‍‍‍‍
ထို့နောက် ဖိတ်ကြားထားသည့် ဂုဏ်သရေရှိ ဧည့်သည်တော်များမှ အကြံပေး အမှာစကားများ တက်ရောက် ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
☑ Mr. Kanogrit (System Engineer Managing, Thailand & Indochin, Cisco) မှ
“ Cisco ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့Business တွေကို Digital Transformation Journey ၏ တထောင့်တနေရာမှ ပါဝင်ကူညီမိသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူမိကြောင်း”‍‍‍‍‍‍
☑ U SyWann (Cisco) မှ “NEX4 နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးလက်တွဲခွင့်ရရှိသည့် American Business တစ်ခုအနေဖြင့် ဝမ်းသာအားရဂုဏ်ယူမိကြောင်း”‍‍‍‍‍‍
☑ CISCO MYANMAR Team Leader ဖြစ်သူ ကိုစိုင်းဝဏ်မှလည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ IT Industry အကြောင်းကို ပွဲတက်ပရိတ်သတ်များထံ မျှဝေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
➡ NEX4 ရဲ့ တွဲဖက်တည်ထောင်သူ Technology Director ဖြစ်သူ ကိုမင်းမြတ်စိုးမှ ပွဲအပိတ်အဖြစ် ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီး Customer& Partner Appreciation Dinner နှင့် LUCKY DRAW အစီအစဉ်ကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် အဖွဲ့လိုက် အမှတ်တရဓာတ်ပုံ မှတ်တမ်းများရိုက်ကူးပြီး NEX4 5th YEAR ANNIVERSARY ကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ‍‍‍‍‍‍
ထိုသို့ ၅ နှစ်ပြည်အထိမ်းအမှတ်ပွဲကျင်းပရာမှာလည်း ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့ ကြေငြာချက် (၂) ခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးအချက်ကတော့‍‍‍‍‍‍
1️⃣ NEX4 ဟာ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတွေထဲမှာ Global IT Industry ရဲ့ Market Leader ဖြစ်တဲ့ CISCO ရဲ့ ပထမဆုံးသော GOLD LEVEL PARTNER ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ CISCO GOLD LEVEL PARTNER ဖြစ်လာတဲ့အတွက် NEX4 ဟာ မျိုးဆက်သစ် နည်းပညာတွေ (NEXT Generation Technology) ကို Customer တွေဆီ ယူဆောင်လာဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။‍‍‍‍‍‍
2️⃣ ဒုတိယအချက်ကတော့ NEX4 ဟာ နိုင်ငံတော်က သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်တဲ့ အခွန်ငွေအများဆုံး ထမ်းဆောင်သူများ စာရင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ခြင်းပါ။ နိုင်ငံတော်က အသိအမှတ်ပြုတဲ့ မှတ်တမ်းလွှာဟာ ကျွန်တော်တို့ NEX4 အတွက် နိုင်ငံအကျိုးပြု အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်စေခဲ့တာပါ၊ ထပ်ဆောင်းအနေဖြင့်လည်း ယခုထက်ပိုကောင်းသော၊ ကမ်ဘာ့ နည်းပညာသစ်များကို နောက်ကျမနေပဲ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရော ပြည်ပမှာပါ ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ကြောင်း ကတိပေးလိုက်ရပါတယ်။
We, the NEX4, an ICT Solutions Provider in Myanmar heldasuccessful event for 5th year anniversary on March-14-2019 at Lotte Hotel Yangon with over 250 attendees which include our partners and loyal customers after five years of journey in growing business together.
We have gratefully worked with our partners supporting customers in every possible way for ICT Development in Myanmar. NEX4 and partners have delivered valued solutions to customers in Myanmar and also in foreign countries. ‍‍‍‍‍‍
➡ Accordingly, with Agenda, the event has started with technical sharing sessions (Security Operation Center and SOAR technology, Cisco Unified Communication Solutions for Enterprise Collaboration, Firewall deployment in ACI environment and WAN evolution and benefits of SD-WAN) by NEX4 Technical Specialists.
➡ NEX4 has greeted with customers and partners with Corporate Anniversary Video, how NEX4 has established and developed with customer alongside. U Aung Thurein, the Managing Director of NEX4, gave an opening speech at the end of Video. ‍‍‍‍‍‍
➡ We invited our honor guests for speech and Ko Sai Wynn from CISCO MYANMAR team also shared about NEX4 activities and IT development in Myanmar. U Minn Myat Soe who is NEX4 Co-founder and Technology Director gave thank you speech and the event was ended successfully withalucky draw and group photo. ‍‍‍‍‍‍
NEX4 have announced2interesting and honorable statement on the 5th Anniversary Event. ‍‍‍‍‍‍
☑ First, NEX4 became the first local GOLD Partner with CISCO, which is GLOBAL IT industry market leader. BecomingaGOLD partner, NEX4 is entitled with capabilities to deliver new technology to customers. ‍‍‍‍‍‍
☑ Second, NEX4 reach its name into the most 500 tax paid company list of the nation. We are very honored to have this certificate and to beasmall part of building our society. We, the NEX4 team, hold the commitment to bring new technologies and services to deliver into customers in Myanmar and foreign.